ဖိုးသော် ကိစ္စ နဲ့ပတ်သက် ပြီး မနေ နိုင်တော့လို့ အားလုံး သိအောင် အောင်လ အန်ဆန်း ဒဲ့​ပြောပြီ – Cele Oscar
May 12, 2021 By L YC Celebrity
ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက ရနျကုနျက Gym မှာ ဗုံးပေါကျခဲ့တဲ့ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီးဖိုးသျောအပျေါအပွဈပုံခခြံထားရပွီး အဖမျးခံထားရတာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီကိဈအပျေါမှာ Burmese Python လို့နာမညျကွီးတဲ့အောငျလအနျဆနျက ဖိုးသျောမှာအပွဈမရှိဘူးလို့သူယုံကွညျကွောငျး ဖိုးသျောဘကျကကာကှယျပွီးပွောကွားသှားတာဖွဈပါတယျ။“As long as I’ve known him, he’sagentleman and good-hearted human being… please try not to spread fake news and hate,”“သူ့ကိုကနြျောသိသမြှကတော့ ဖိုးသျောဟာ စိတျထားနှလုံးထားကောငျးပွီး လူကွီးလူကောငျးဖွဈပါတယျ။
ကြေးဇူးပွုပွီး သတငျးအတုတှေ၊အမုနျးစကားတှမေဖွနျ့ပါနဲ့” တဲ့။“The fighting that we do in the circle is nothing compared to what’s going on with the people in Myanmar right now. Stay strong and stay united.”“ကနြျောတို့ကွိုးဝိုငျးထဲမှာခကြွ နပမျးလုံးကွလို့ထိခိုကျဒဏျရာရတာဟာ အခုမွနျမာပွညျသူတှထေိခိုကျခံစားနရေတာနဲ့စာရငျ ဘာမှမဆိုငျပါဘူး။စညျးလုံးညီညှတျကွပါ။ တောငျ့ထားကွပါ” တဲ့။
“Every day I wake up to more dark news of all the killing happening in Myanmar,”“မနကျမိုးလငျးလို့ ကနြျောအိပျရာကနိုးတာနဲ့ မွနျမာပွညျကသတငျးဆိုးတှေ၊နရောတိုငျးမှာသတျဖွတျခံနရေတဲ့သတငျးတှကေိုပဲကွားသိနရေပါတယျ” တဲ့။“We will never give up and we will keep fighting as long as we breathe. Pray for all the tribes and people in Myanmar.”“ကနြျောတို့အသကျရှုနသေ၍ ဘယျတော့မှလကျမွောကျအရှုံးမပေးပဲ ဆကျလကျတိုကျပှဲဝငျသှားကွပါမယျ။
မွနျမာပွညျက လူမြိုးစုတိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ မွနျမာပွညျသူပွညျသားတှအေတှကျဆုတောငျးပါတယျ” ဆိုပွီးပွောထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။အခုလို ဝငျ ရောကျ ဖတျ ရှု့ပေးကွတဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျခွငျးစီတိုငျးကနျြးမာပြျောရှငျသောနရေ့ကျ မြားပိုငျဆိုငျ နိုငျကွ ပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျ ပါတယျ။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ရန်ကုန်က Gym မှာ ဗုံးပေါက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိုးသော်အပေါ်အပြစ်ပုံချခံထားရပြီး အဖမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ်အပေါ်မှာ Burmese Python လို့နာမည်ကြီးတဲ့အောင်လအန်ဆန်က ဖိုးသော်မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့သူယုံကြည်ကြောင်း ဖိုးသော်ဘက်ကကာကွယ်ပြီးပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။“As long as I’ve known him, he’sagentleman and good-hearted human being… please try not to spread fake news and hate,”“သူ့ကိုကျနော်သိသမျှကတော့ ဖိုးသော်ဟာ စိတ်ထားနှလုံးထားကောင်းပြီး လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး သတင်းအတုတွေ၊အမုန်းစကားတွေမဖြန့်ပါနဲ့” တဲ့။“The fighting that we do in the circle is nothing compared to what’s going on with the people in Myanmar right now. Stay strong and stay united.”“ကျနော်တို့ကြိုးဝိုင်းထဲမှာချကြ နပမ်းလုံးကြလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဟာ အခုမြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်ခံစားနေရတာနဲ့စာရင် ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။စည်းလုံးညီညွတ်ကြပါ။ တောင့်ထားကြပါ” တဲ့။
“Every day I wake up to more dark news of all the killing happening in Myanmar,”“မနက်မိုးလင်းလို့ ကျနော်အိပ်ရာကနိုးတာနဲ့ မြန်မာပြည်ကသတင်းဆိုးတွေ၊နေရာတိုင်းမှာသတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့သတင်းတွေကိုပဲကြားသိနေရပါတယ်” တဲ့။“We will never give up and we will keep fighting as long as we breathe. Pray for all the tribes and people in Myanmar.”“ကျနော်တို့အသက်ရှုနေသ၍ ဘယ်တော့မှလက်မြောက်အရှုံးမပေးပဲ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါမယ်။
မြန်မာပြည်က လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်” ဆိုပြီးပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ဝင် ရောက် ဖတ် ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက် များပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြ ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်။